Hada waxaad ku isticmaali kartaa Kaaliyaha Google dadka ku hadla Sonos | Wararka IPhone
Sonos waxay ku sii socotaa tartankeeda aan la joojin karin si ay ugu diyaariso kuhadlayaasheeda horumarkii ugu dambeeyay, kaliya maahan tayada codka laakiin sidoo kale marka laga hadlayo kaaliyeyaasha farsamada. Waqti badan ayey ahayd tan iyo intaad kudareyso awooda aad ku rakibto Alexa dadka kuhadlaya mikrofoonka (Sonos One, Move, and Beam) iyo hadda qaado tallaabo kale oo aad u weyn si aad uga soocdo tartanka adoo ku daraya Kaaliyaha Google. Waxay sidaas ku noqotaa nidaamkii ugu horreeyay ee u oggolaanaya midkoodna labada caawiye gacmeed ee qalabkooda, u oggolaanaya dadka isticmaala inay doortaan midka iyaga ku habboon.
Laga bilaabo hadda waa suurtagal in lagu daro Kaaliyaha Google mid ka mid ah kuwa ku hadla makarafoonka Sonos. Nidaamka rakibida waxaa laga sameeyaa codsiga Sonos laftiisa, dhowr daqiiqo gudahood, iyadoo la adeegsanayo habab isku mid ah kan ay tahay in la sameeyo si loogu daro Alexa. Waqtigan xaadirka ah suurtagal maaha in la helo labada caawiye ee ku shaqeeya isla af-hayeenka, oo ah wax ay shirkaddu sheegtay inay ku shaqaynayso laakiin aan wali lagu guuleysan. Maxay suurtagal tahay in lagu rakibo kaaliyeyaal kala duwan nidaamkaaga Sonos, adigoo ku leh Alexa qolka jiifka iyo Kaaliyaha Google ee qolka fadhiga, sidoo kale u oggolaanaya isdhexgalka labada, maxaa yeelay haddii aad bilowdo hees ku jirta Alexa, waxaad weydiin kartaa heesta heesteeda Google.
Caawiye Google waxaad ku xakameyn kartaa muusikada iyo dib u soo celinta raadiyaha, telefishanka daari kartaa oo aad la socon kartaa Sonos Beam adoo weydiinaya Google, dhagayso soo koobida wararka iyo xakameynta gurigaaga caqliga leh haddii aad leedahay qalab la jaan qaadaya kaaliyaha Google. Iyo haddii asturnaanta adiga ku khuseyso, Dhamaan ku hadlayaasha Sonos ee makarafoonka leh waxay leeyihiin xakameyn taabasho oo gabi ahaanba hareerta makarafoonka ilaa aad dib uga daarto. Marka lagu daro iswaafajinta Alexa (Amazon) iyo Kaaliyaha Google, waxaa muhiim ah in la xasuusto in kuwa ku hadla Sonos ay la jaan qaadi karaan airPlay 2 sidaa darteedna ay la socdaan Siri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Hadda waxaad ku isticmaali kartaa Kaaliyaha Google dadka ku hadla Sonos
Samsung iyo Sony ayaa hadda haysta barnaamijka Apple TV ee la heli karo